Wasiirka Maaliyadda oo furay shir ay ka qeyb galeen W. Maaliyadda Maamul goboleedyada – STAR FM SOMALIA
Wasiirka Maaliyada Soomaaliya Maxamed Aadan Ibraahim Fargeeti ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furay shir ballaaran oo ay isugu yimaadeen Wasiirada Maali
yadda ee Maamul goboleedyada dalka, kaasoo looga arrinsanayay sidii loo wada shaqayn lahaa, la iskuna dhaafsan lahaa xogaha ku aadan arrimaha maaliyadda dalka.
Mr Fargeeti oo furitaankii shirka khudbad dheer ka jeediyay ayaa sheegay in kulankan kii ka horeeyey uu ka dhacay magaaladda Nairobi ee dalka Kenya, shirka maantana uu yahay mid is xog waraysi ah.
“Waxaan aad ugu mahad celinayaa wasiirada Maamul Goboleedyada oo soo ajiibay martiqaadka Dowladda, ujeedaduna ay tahay in aan muujino waajibka inaga wada saaran shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan” ayuu yiri Wasiirka Maaliyada Soomaaliya.
Sidoo kale Wasiirka ayaa sheegay inta uu soconayo shirkan in laga doodi doono qaabka ugu haboon ee loo wanaajin karo hanaanka maaliyadda dalka, iyadoo Wasiirku uu tilmaamay inuu rajo weyn ka qabo in shirka uu ka soo baxo qodobo wax ku ool ah.
Shirkan ayaa qeyb ka noqonaya shirar dhowaanahan ka dhacayay magaalada Muqdisho oo ay yeelanayeen Wasiirada Xukuumadda Federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee ay wada shaqeynta ka dhaxeys